ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အတုအွန်လိုင်း Daters ကြည့်ရန်ရန်လက်ငင်း Checkmate လမ်းညွှန်
အားဖြင့် Logan strain
တစ်ခါတလေသူတို့ပဲအာရုံစိုက်ဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်. တစ်ခါတလေသူတို့ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးပွိုင့်အောင်မှကြိုးစားနေပါတယ်. ထိုအတခါတရံကိုယ့်ကိုလိမ်လည်မှုကိုသင်ချင်တယ်. သူတို့ရဲ့စိတ်အားဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲ, ရိုးသားအွန်လိုင်း daters dupe ဖို့ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးယဉ်သူများ၏ profile - အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်း၏သိသာထင်ရှားသောအတုံးပြီးပြည့်စုံအတုများမှာ. တဖန်သင်တို့မျက်စိတစ်ထုတ်ကိုမစောင့်ကြပါလျှင်, သင်မယ့်သားကောင်ဖြစ်နိုင်.
ဒီအရိပ်ရတဲ့အလေ့အကျင့်, အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြသည် ငါးခူ, လျော့ကလူတွေရဲ့အချိန်နှင့်ငွေကိုနေ့တိုင်း. အွန်လိုင်း daters ၏အများစုဟာအံ့ဩဘွယ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏နေစဉ်, အနည်းငယ်ဆိုးရွားဥထွက်ရှိပါတယ်. ကံကောင်းထောက်မစွာ, အွန်လိုင်းလိမ်လည်သူများကိုအအံဆွဲထဲမှာ sharpest ဓါးမဖြစ်လေ့, ဒါကြောင့်သူတို့များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ပရိယာယ်ကိုချွတ်လက်တို့ရိုးရှင်းတဲ့အမှားများပါစေ. သင်သည်သင်၏နောက်ရက်စွဲအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ကြောင်းသေချာစေရန်ချင်တယ်ဆိုရင်, အချစ်မျက်နှာသို့သင်၏အွန်လိုင်းခရီးစဉ်အတွင်းစိတ်ထဲဒီရိုးရှင်းတဲ့အကြံပြုချက်ကိုစောင့်ရှောက်.
1) တစ်ဦးကို Reverse Image ကိုရှာဖွေရန် Run
တစ်ဦးကအတုအကောင့်ကိုလည်းအတုဓါတ်ပုံတွေကိုဆိုလိုပါတယ်. အွန်လိုင်း swindlers အတုအွန်လိုင်း Profile ကိုတည်ဆောက်ရန်လာတဲ့အခါ, သူတို့များသောအားဖြင့်သူတို့ကအင်တာနက်ကိုချွတ်ရှာဖွေဓါတ်ပုံတွေကိုဖမ်းပြီးလိမ့်မယ်. အထူးသဖြင့်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အ "ပူကောင်လေး" သို့မဟုတ် google ပြီးနောက်ရှာဖွေသောသူတို့ "ပူမိန်းကလေး။ " သူတို့ကပင်တတ်နိုင်သမျှ alluring အဖြစ်သူတို့၏ပရိုဖိုင်ကိုလုပ်ရသည့်မော်ဒယ် sites များမှ headshots upload တင်ပါလိမ့်မယ်. အရူးလုပ်မထားပါနဲ့. သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းရုပ်ပုံလွှာတစ်ထပ်စမ်းကြည့်ဖို့လွယ်ကူတဲ့လမ်းကို Google image ကိုပြောင်းပြန်ရှာဖွေ running အားဖြင့်ဖြစ်တယ်. သူတို့ရဲ့ Profile picture အားလုံးအင်တာနက်ကိုကျော်အသစ်မွမ်းမံမယ်ဆိုရင်, သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံကိုသိသာတစ်စုံတစ်ဦးပိုင်လျှင်, အကယ်. သင့်ရဲ့လက်တွင်ငါးခူရရှိပါသည်သိပါလိမ့်မယ်.
2) ကြောက်မက်ဘွယ်အင်္ဂလိပ်သည် Look
သူတို့ရဲ့ profile ကိုသူတို့ပြည်နယ်တွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ကြကဲ့သို့သူတို့ကိုငါပေါ်လာစေတယ်ဆိုရင်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သဒ္ဒါရုံဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည်အဘယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့မြည်, တစ်ကြီးမားသောအနီရောင်အလံဖြစ်သည်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လိမ်လည်သူများကိုမကြာခဏရေခြားမြေခြားများမှာ. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အတောင်ကို Rushmore အဖြစ်အမေရိကန်အဖြစ်င်သည်ဟုဆိုဦးမည်, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့သူတို့့နိုင်ရန်အတွက်အမေရိကန်ပိုက်ဆံယူသည်ဟုဆို. သင့်အွန်လိုင်း paramour အဆက်မပြတ်တစ် 3rd တန်းစာသင်ခန်းမှာဝဲပျံမည်မဟုတ်ကြောင်းစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနှင့်သဒ္ဒါအမှားတွေကိုပေးလျှင်, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေနိုင်ငံခြားလိမ်လည်သူများကိုင်ဆိုလိုစေခြင်းငှါ,.
3) အွန်လိုင်းမှနောက်ခံသမိုင်းကို check လုပ်ပါ
ပြည်သူ့မှတ်တမ်းများသူတို့ကိုမြင်ခြင်းငှါအလိုသောသူမည်သည်ရရှိနိုင်တယ်. ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းသင်ဆက်သွယ်လာသူလူတစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်ဆိုပါက, သူတို့တစ်တွေအများပြည်သူမှတ်တမ်းများဖိုင်ရှိသင့်. သူတို့၏အမည်ရှာရန်, သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်နှင့်အတူ, အွန်လိုင်းမှအများပြည်သူမှတ်တမ်းများရှာဖွေရေးအတွက်. အဘယ်အရာကိုမျှတက်လာလျှင်, သောသူတို့သည်သင်နှင့်အတူလုံး​​ဝရိုးသားမယ့်တစ်ဦးဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာင်.
4) Fast လုပ်ငန်းရှင်များသည်အထဲက watch
တစ်စုံတစ်ဦးကအွန်လိုင်း "သင်တို့သိစေခြင်းငှါရယူခြင်း" ခုန်ချနှင့်ဖြောင့်ဆက်ဆံရေး၏ "အသက်အဘို့အ Soulmates" စင်မြင့်သို့သွားလိုလျှင်, သူတို့တစ်တွေအသည်းအသန်ရင်ခုန်စရာင်ကြောင့်ထိုသို့မနေရစေခြင်းငှါ,. သူတပါးတို့သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးထက်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်မှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရစေခြင်းငှါ,. အွန်လိုင်းလိမ်လည်သူများကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်သင်၏အချစ်စိတ်ကိုရယူနိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်, သူတို့စူပါအမြန်လှုပ်ရှားလိမ့်မယ်. မသင်္ကာအစာရှောင်ခြင်း. သင်တစ်ဦးသည်လေဘွေအွန်လိုင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းတွင်ဖမ်းမိဆိုရင်, သူတို့ပြောဆိုလျက်င်အရာအားလုံးမှန်သည်ကိုနှေးကွေးမှတစ်စက္ကန့်ကိုယူက check ကို double.
5) သူတို့ကသာလျှင်အွန်လိုင်း Chat လိုလျှင်ကြည့်ရှုပါ
ဖြစ် 100% အီးမေးလ်နှင့်စာသားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်ဆက်သွယ်ရေး၏? မျက်နှာချင်းဆိုင်ခေါ်ပါသို့မဟုတ်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးကငြင်းဆန်အစွန်းရောက်ရှက်ကြောက်စိတ်ထက် ပို. ညွှန်ပြစေခြင်းငှါ,. ဒါဟာသူတို့ရဲ့သည်မုသာစကားကိုယုံမှားသောစိတ်ဝင်မှသူတို့သင်သည်တစုံတခုကိုမပေးချင်ကြဘူးဟုဆိုလိုစေခြင်းငှါ,. ပွင့်လင်းကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ထင်ရှားစွာသင်နှင့်အတူမဆက်သွယ်နိုင်လျှင်, သူတို့အားလုံးကိုသင်၌စိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်သည့်လက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ်ထိုငွေကို ယူ..
နောက်ဆုံး, သင်အွန်လိုင်းလိမ်လည်သူများကိုအားဖြင့်များထံခဲ့တာနဲ့သူတို့ဆိုပိုက်ဆံထဲကသင်တို့ကိုငါ swindled င်လျှင်, ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ကအစီရင်ခံ အင်တာနက်ကိုရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားခြင်းစင်တာ. ၎င်းသည်သင့်အားသင်အရူးခဲ့ပြီးပြီဝန်ခံဖို့နည်းနည်းအရှက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်အစီရင်ခံမှုမျိုးကိုလာဆောင်မှာမှအခြားလူများကိုကူညီကာကွယ်ဦးမည်.